SINTO-MAHERY SY FANENDAHANA : Roa lahy voasambotra teny Andohatapenaka sy 67 ha
Faritra mena amin’ny asan-jiolahy an-tanàn-dehibe toy ny sinto-mahery sy fanendahana ny eny amin’ny manodidina an’Andohatapenaka, 67 ha, Ankasina, Antohomadinika ary Isotry iny. 16 novembre 2020
Lehilahy miisa roa indray no voasambotra ny herinandro lasa teo iny, ka niakatra Fampanoavana ny zoma 13 novambra, raha ny angom-baovao avy amin’ny Polisim-pirenena CSP7. Lehilahy 32 taona sy 31 taona ireo voasambotra, izay tompon’antoka tamin’ny fanaovana sinto-mahery, ny iray nisintona firavaka volafotsy teny am-bozonana vehivavy iray nandeha fiara taksibe teny 67 ha manakaiky ny Fiangonana Jesosy Mamonjy iny, ny 10 novambra lasa teo.
Ny lehilahy iray indray dia tratra nangalatra kitapo iray napetraka tao anaty fiara nijanona amoron-dalana teny Andohatapenaka, ny alakamisy 12 novambra. Nisy nahatsikaritra ny zava-misy ary niantso Polisy avy hatrany ny tompon’ny fiara ka tra-tehaka tsy ela akory ity farany avy eo.
Marihina moa fa efa saika ho isanandro ny trangana fanendahana sy sinto-mahery raha amin’iny faritra iny eto an-drenivohitra.